REPUBLICADAINIK | ललितपुर कांग्रेसमा अमात्य ‘ग्याङ’को लज्जास्पद् हार, राणा समूहको शानदार जित - REPUBLICADAINIK
ललितपुर कांग्रेसमा अमात्य ‘ग्याङ’को लज्जास्पद् हार, राणा समूहको शानदार जित
जावलाखेल । ललितपुर जिल्लामा नेपाली कांग्रेसका युवा नता एवम् पूर्वराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणाको समूहले जितेको छ ।
शुक्रबार भएको ६ वटा प्रदेश सभाको अधिवेशनमा राणा समूहले कब्जा जमाएको छ ।
ललितपुरमा पौडेल–कोइराला समूह कमजोर छ । सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने युवा नेता राणाको समूहले जितेपछि जिल्ला सभापति मदनबहादुर अमात्य चकित परेका छन् । एउटै गुट भए पनि राणा र अमात्यबीच ललितपुर कांग्रेसभित्र ठूलो द्वन्द्व छ ।
ललितपुर क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा ‘क’मा राणा निकट मानिने मिलन सिलवाल सभापतिमा विजयी भएका छन् । सिलवालले २०० मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । सिलवालका प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ घलानले ८३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा ‘ख’ मा राणा निकटका ज्ञानबहादुर लो सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । लोले २०१ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । लोसँग कृष्णचन्द्र महर्जन सभापतिमा पराजित भएका छन् । महर्जनले ११० मत प्राप्त गरेका थिए ।
‘क’का उम्मेदवार घलान र ‘ख’का उम्मेदवार महर्जनलाई क्षेत्र नं. १ का वर्तमान क्षेत्रीय सभापति राजनप्रसाद घिमिरे, जिल्ला सभापति मदनबहादुर अमात्य, पौडेल समूहका नेता मथुराप्रसाद घिमिरे, खोमप्रसाद घिमिरे लगायतका नेताहरूको समर्थन रहेको थियो ।
सभापतिमा विजयी भएका सिलवाल र लोलाई पूर्व राज्यमन्त्री राणा, युवा नेता मीनकृष्ण महर्जन, ऋषिराम घिमिरे लगायतका नेताहरूको समर्थन रहेको थियो ।
ललितपुर क्षेत्र नं. १ को दुवै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा नेता राणा समूहको पूरै प्यानल विजयी भएका छन् ।
ललितपुरको क्षेत्र नं. २ को प्रदेश सभा निर्वाचन ‘क’ मा दीवाकर नेपाल सभापतिमा विजयी भएका छन् । ‘क’को सभापतिमा त्रिपक्षीय भिडन्त भएको थियो । नेपालले ८५ प्राप्त गरेर विजयी हुन् । सञ्जय अर्यालले ६३ र जयकिशन बोगटीले २८ मत प्राप्त गरेर पराजित भएका छन् ।
ललितपुर– २ को प्रदेश सभा ‘ख’मा चन्द्रमान बज्राचार्य सभापतिमा सर्वसम्मत चयन भएका छन् । नेपाल र बज्राचार्यलाई पूर्व सांसदद्वय रामकृष्ण चित्रकार र चन्द्रमहर्जनको समर्थन रहेको थियो ।
ललितपुर क्षेत्र नं. ३ को प्रदेशसभा क्षेत्र ‘क’मा कांग्रेस नेता महासमिति सदस्य जितेन्द्र श्रेष्ठ निकट मानिने वीरेन्द्र महर्जन सभापतिमा विजयी भएका छन् । गोविन्द घिमिरे सभापतिमा पराजित भएका छन् । महर्जनले ११५ र घिमिरेले १०७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
ललितपुर– ३ को प्रदेश सभा क्षेत्र ‘ख’ मा सुरेन्द्र डंगोल सभापतिमा विजयी भएका छन् । डंगोलसंगै उनको प्यानलै विजयी भएको छ ।
अर्का सभापतिका उम्मेदवार निरन खड्का पराजित भएका छन् । डंगोलले १०२ मत प्राप्त गरि विजय भएका थिए । खड्काले ७० मत प्राप्त गरेका थिए ।
डंगोललाई महासमिति सदस्य जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठको समर्थन रहेको थियो । पराजित उम्मेदवारद्वय घिमिरे र खड्कालाई गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख समेत रहेका क्षेत्र नम्बर ३ का वर्तमान क्षेत्रीय सभापति गजेन्द्र महर्जन, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र जिल्ला सभापति मदनबहादुर अमात्यको समर्थन रहेको थियो ।
Published : Saturday, 2021 November 20, 9:37 am